Tag: mutengo | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 16, 2014 Muvhuro, September 15, 2014 Tori Atkinson
Munyika yekutengesa, zano ndizvo zvese. Kushandisa kwakasungirirwa zvakananga kumatekiniki ekutengesa ekutengesa uye zvinoreva kuti varidzi vezvitoro vanofanirwa kugadzira kana chinangwa chavo chiri chekuwedzera mari inoshandiswa nevatengi. Neraki, kune akati wandei akaedzwa uye akaedzwa matekinoroji ane simba rekuti vatengi vako vashandise zvakanyanya, uye kazhinji - uye isu tave kuda kukuregedza iwe mune zvimwe zvakavanzika zvekutengeserana kuti iwe ugone kuwana izvo-zvakakosha kukosha kwekutengesa
Zvakanaka, inguva yekuita rant. Vhiki rino ndakarohwa kakati wandei uye ndiri pachokwadi pakurasikirwa kuti vamwe vevanhu ava vakazviita chero bedzi vaine bhizinesi. Ini ndoda kutora zvinhu zvishoma zvakatwasuka paunoenda kunotaurirana nekutenga masevhisi kubva kune yako inotevera Agency. Mutengo ndizvo zvaunobhadhara, kwete izvo zvaunowana Iyi ndiyo mutengo wechigadzirwa kana sevhisi
Mutengo we Mahara Webhusaiti Kuedzwa
Chitatu, June 13, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Iyi ndiyo nharo inoenderera ichitsamwa kana zvasvika paInternet… nei ndichifanira kubhadhara mhinduro ini ndichigona kushandisa yemahara? Isu tinoshandisa akawanda emahara kunyorera - asi takapihwa ruzivo rwedu muindastiri, ndinofunga isu takasiyana nemutemo. Sesangano, tiri kunyatsoshandisa tekinoroji yatinoona ichibatsira uye kuiisa kushanda kubatsira vatengi vedu. Zvakawandisa nguva tinoona